‘दोहोरी च्याम्पियन’को सामाजिक संजाल भरि आलोचना – काल्पना दाहालको पक्षमा दर्शक उर्लिय ,किन आलोचित भयो त ? – Ramailo Sandesh
काठमान्डौ , दोहोरी रियालिटी टेलिभिजन शो’ ‘दोहोरी च्या’म्पियन’को प्रशारण शनिबार’देखि सुरु भएको छ । नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुती रहेको ‘दोहोरी च्याम्पियन’को पहिलो श्रृ’ङ्खलामा डिजिटल अडिसनबाट छनोट भएका ३५ समूहको फि’जिकल अडिसन प्रशारण गरिएको थियो ।
पहिलो भाग प्रशारण भएसँगै यो शोले दर्शकको न’कारा’त्मक प्र’तिक्रिया पाएको छ । युटुबमा यो शोलाई लिएर दर्शकले आलोचना गरिरहेका छन् । यसको मु’ख्यकारण भने, यसका निर्णायकहरु हुन् । लोकदोहोरी क्षेत्रमा स्थापित क’लाकारहरुले समेत ‘दोहोरी च्याम्पियन’मा निर्णायकको निर्णय गर्ने शै’लीलाई लिएर सामाजिक संजालबाटै आलोचना गरिरहेका छन् ।
शनिबार युट्युबमा सार्वजनिक यसको पहिलो श्रृङ्खलाले बुधबार बिहानसम्म ३ लाख १० हजार बढी भ्यूज बटुलेको छ । जसमा ८ हजार बढी प्रतिक्रियाहरु आएका छन् । अधिकांश प्रतिक्रिया आलोचनाले नै भरिएका छन् । अझ, विशेषगरि निर्णायक चन्द्र शर्माले दोहोरी गायिका कल्पना दाहालमाथि गरेको टिप्पणीमा धेरैले आक्रोश पोखेका छन् । कल्पना दाहालको प्रस्तुतिपछि चन्द्र शर्माले प्रश्न गरेका छन्, ‘हामीले अरु
कुनै टीभी–टीभीतिर देखेको कल्पना बैनी हो तपाई ?
‘दोहोरी च्याम्पियन’लाई नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो दोहोरी रियालिटी शो भनिएको छ । यो प्रतियोगीतामा प्रथम हुनेले २० लाख, दोश्रो स्थान प्राप्त गर्नेले १० लाख, तेश्रो स्थान प्राप्त गर्नेले ३ लाख र एक जनाले २ लाख पुरस्कार सहितको सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । ‘दोहोरी च्याम्पियन’ हरेक शनिबार बेलुका ८ः५० बाट नेपाल टेलिभिजनमा प्रशारण हुँदै आएको छ । – अनलाइन खबर